Imisa Qof Ayaa Xanuunka AIDS-ka Qaba Dalka Masar?
Sunday 4th December 2016 00:03:05 in Arrimaha Bulshada by Super Admin
Khubaro cusub oo dhanka caafimaadka ay ayaa daraasad ay samaysay oo ku saabsan dadka Xanuunka AIDS-ka qaba dalkaasi Masar soo saaray, iyaga oo sheegay inay
xanuunkaasi la nool yihiin waqtigan dad gaadhaaya ilaa 6882 qof oo reer Masar ah.
Dadkan ayaa tiro kamid ahi tahay dumar, waxaanay sheegeen khubaradani in ay dumarku tiro ahaan ihiin 1239 Dumar ah.
Daraasdan oo ay wadeen kooxdaasi oo ka socotay wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi oo qoraal kooban soo saaray kuna daabacay wargeyska Al Ahraam oo uu kazoo xigtay wargeyska Dawan ayaa lagu sheegay in dadka xanuunkan la nool laga soo bilaabo ilaa sannadkii 1986 kii ay yihiin 8437 qof.
Dadkaasi kuwo badan oo kamid ah ayay sheegtay wasaaradda iyo kooxdaasi inay u dhinteen xanuunkan laga soo bilaabo sannadkaasi ilaa sannadkan sii dhamaanaaya ee 2016 –ka , iyada oo ay waqtigan dadka ka bad baadey ee aan dhimani yihiin ilaa 6882 qof, dadkaasi oo 75% kamid ahi yihiin dadka da’doodu tahay 15 ilaa 50 sanno jirka.
Wasaaradda ayaa sheegtay inay sameeyeen laga soo bilaabo 1986 kii Barnaamij ay xanuunkaasi la dagaalankiisa ugu talo galeen, iyada oo la yaraynaayo dadka u dhimanaaya , sidoo kalena laga hortegaayo inuu faafo ama dadka uu ku dhaco ,waxaanay intaasi ku dareen in daryeel la siiyo dadka uu xanuunkaasi ku dhacay iyo qoysaskoodaba.
Dr Amr Qandil oo ah ninka haysta waaxda la dagaalanka iyo ka hortaga xanuunkaas ee wasaaradaasi caafimaadka ee Masar ayaa sheegay in aan xanuunkan lagu kala qaadin macaamilka caadiga ah ee maalin walba la sameeyo oo ah in lays gacan qaado, dharka in la wadaago, in goobaha shaqada la wadaago, in wax la wada cuno ,goobaha shaqada, xamaamada,gaadiidka la wada raaco iyo wixii lamid ah.
Dr Maxamed Geneidi ayaa isna sheegay in ay rajaynayaan in uu yaraado xanuunkaasi, ugu dambayna meesha ka baxo haddii ay dadku macsida iska daayaan oo xagga Alle usoo noqdaan guurkana la dhiirigeliyo.
Shir-guddoonka Guurtida Oo Ballanqaaday In Ay Wax Ka Qabanayaan Wasiir Guri Barwaaqo